अस्पतालको शय्यामै सप्तरंगी टीका
२०७६ कार्तिक १२ मंगलबार १६:३०:०० प्रकाशित
समय ११ः१५ बजे बिहान।
स्थानः वीर हस्पिटल
आज भाइटिका। अस्पताल बाहिर सडकमा मखमली फूल र सप्तरंगी टीकाका बोकेर हिँड्नेको चहलपहल छ। कोही हतारमा छन् भने कोही टीकाको शुभसाइत आइपुग्नै लाग्दा पनि मखमलीको माला र सप्तरंगीको व्यापार गरिरहेका छन्।
आजका दिन दिदी बहिनीहरुले दाजुभाइलाई दिर्घायुको कामना गर्दै सप्तरंगी टिका लगाइदिने गर्छन्। मिठो मिठो पकवान बनाएर खुवाउँछन्। दाजुभाइले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार कोसेली दिन्छन्। त्यसैले यो दिन विशेष छ।
गलामा माला अनि निधारमा सप्तरंगी टीका लगाउँदै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु रमाउनु पर्ने समयमा अस्पतालको शय्यामा रहेकाहरुको तिहार कस्तो होला? सप्तरंगी टीकामा रमाउनु पर्ने समयमा सेतो एप्रोन र हरियो रंगको तन्ना हेरिरहेका बिरामीले कसरी तिहार मनाउलान्? यी र यस्तै जिज्ञासाको उत्तर खोज्दै म देशकै पुरानो वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा पुगेको हुँ।
यी दुई अस्पतालमा दुई घन्टा बिताउँदै अस्पताल बस्नेहरुको तिहारलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो र त्यही दृश्यलाई शब्द र केही तस्बिर मार्फत यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
भाइटीकाको विशेष रिपोर्टिङका लागि वीर अस्पताल पुग्दा अस्पताल विगतको तुलनामा सुनसान देखिन्छ। अरुबेला निकै चहलपहल रहने देशकै ठूलो अस्पताल वीरमा एकाध मात्र मान्छेहरु हिँड्डुल गरिरहेका छन्। छेउछाउमा एक–दुईवटा फार्मेसी खुलेको देखिन्छ। ओपिडी सेवा बन्द छ भने गेटनिरै रहेको इमरजेन्सी वार्डतिर भने अलि चहलपहल देखिन्छ। फाट्टफुट्ट मान्छेहरु आइरहेका छन् उपचारका लागि।
इमरजेन्सी वार्डमा टीकाका दिन ड्युटी गरिरहेका छन् नर्स मीना शेर्पा र चमेली राउत। बिहान ८ बजेदेखि ड्युटिमा खटिएका उनीहरु ड्युटीले गर्दा साइतमा टीका कहिल्यै लगाउन नपाएको दुःखेसो पोख्छन्। दसैंको टिकाको दिन पनि दुवैको ड्युटी परेको थियो। तर छट्पटिँदै आएका बिरामीहरुलाई निको बनाएर पठाउँदा खुसी लाग्ने बताउँछन् उनीहरु।
चमेली भन्छिन् ‘बिहान ८ बजेदखि दिउँसो २ बजेसम्म ड्युटी छ, त्यसपछि घर गएर भाइटिका लगाउने विचार छ।’
इमरजेन्सी वार्डमा खटिएका ग्रुप इन्चार्ज डा ओजिर देवान बिरामीहरुलाई औषधी प्रिस्क्राइब गर्देछन्। सबै डाक्टर तथा नर्स बिरामीको सेवामा तल्लिन छन्। छेवैमा रहेका डा विकास यादवले आज भाइटिकाका दिन टीका लगाउन नपाएपनि बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। डा यादव दसैं तिहारमा जान नपाएपनि आफ्नो प्रिय पर्व छठमा घर गएर रमाइलो गर्ने बताउँछन्।
न्युरो सर्जिकल वार्डको आइसियु बेड नं ३३७ मा पल्टिरहेकी छिन् भक्तपुरका सञ्जय लामाकी बूढी आमा। टाउकोमा रगत जमेर अप्रेसन गरेकी आमाको स्याहार सुसारमा लागेका छन् उनी। उनका दुई जना दिदी छन्। तर दुवै बाहिर। ६ वर्ष भयो उनले टीका लगाउन नपाएको।
भन्छन् ‘लगाउन त हरेक वर्ष मन लाग्छ, न्यस्रो मेटाउन मैले हिजो फोन गरेर दिदीहरुलाई भाइटिकाको शुभकामना दिएँ।'
न्युरो सर्जिकल वार्डको छेउमा कुरुवा बसेका छन् बालाजुका देवेन्द्र भण्डारी। रातभरी नसुतेको उनको आँखाबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हेर्दा नै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ उनी निकै थाकेका छन्। खाना पनि खाएका रहेनछन्। १६ वर्षीया भतिजीलाई बाइकले हानेपछि उनले हिजो सोमबार १ बजेतिर अस्पताल ल्याएका रहेछन्। भतिजीलाई टाउकोमा चोट लागेको छ। साथमा थिए दाइ भाइजु पनि।
‘मेरा दुई जना दिदी छन्, भतिजीलाई पनि टिका लगाइदिने गरेका थियौँ ,के गर्नु यो पालिको भाइटिका यस्तै भयो’, उनले निरास हुँदै सुनाए।
जेनेरल अपरेसन थियटरको कुर्सीमा बसेका छन् बसन्त आचार्य। एपेन्डिक्स भएर हिजो अस्पताल ल्याएका उनको श्रीमतीको अपरेशन भइसक्यो। उनले हरेक वर्ष टीका थाप्न घर झापा जाने भएपनि यो पालि जान पाएनन्।
उनी भन्छन् ‘यो वर्षको टीका यस्तै भयो, दिदीबहिनीलाई गिफ्ट भने गाडीबाट पठाइदिन्छु।'
वीर अस्पतालबाट बाहिँरिदा ढोकामा भेटिइन् दाङकी जानकी चौधरी। क्लिनरको रुपमा काम गर्ने उनी अस्पतालमा काम गर्न थालेदेखि तिहारका बेला भाइटLका लगाउन घर जान पाएकी छैनन्।
भन्छिन् ‘दसैंमा बिदा मिलेको थियो, तिहारमा भने जहिल्यै ड्युटी पर्छ, ११ वर्ष भयो टीका लगाउन जान पाएको छैन।’
समय ११ः५५ मिनेट
स्थानः ट्रमा सेन्टर, चौथो तल्ला
बेड नं ५४६
दुई जना दिदी आफ्नो भाइलाई यो वर्षको भाइटीकाको साइतमै लगाइदिँदैछन्।
खुट्टा भाँचिएर बेडमा बसेका भाइ टीका थाप्न पाउँदा प्रफुल्ल देखिन्छन्। दिदीबहिनीहरु मिलेर उनलाई गलामा सयपत्रीको माला लगाइदिन्छन्।
भाइले पनि गच्छे अनुसारको दक्षिणा दिन्छन्। अस्पतालमै पनि भाइटीका लगाउन पाउँदा खुसी देखिन्छन् उनीहरु। कोसेलीको रुपमा मसला,मासु, विभिन्न प्रकारका रोटी, फलफूल उपहारको रुपमा पाएका भाइ दंग परे।
मुस्कुराइरहेका उनको अनुहारमा दिदीहरु प्रतिको माया छचल्कीरहेको थियो।
‘अस्पताल बसेदेखि मासु खान पाएको थिएँन, धेरै पछि खाएँ’ उनले हाँस्दै भने। अरु पनि खानेकुरा ल्याइदिएका छन् दिदीहरुले,' उनले खुसी साट्दै भने।
विगत १७ दिनदेखिको अस्पताल बसाइमा रहेका रामेछापका विवेक कार्की पनि आज खुसी छन्। दसैंको पुर्णिमाको दिन स्कुटी सिक्दा बाँया खुट्टा भाँच्न पुगेका उनलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमा ट्रमा सेन्टर ल्याइयो। त्यसपछि उनी अस्पतालमै छन्। धेरैदिनदेखि घर बस्न नपाएका विवेक अस्पतालमै तिहार मनाउन पाउँदा भने खुसी देखिए। दिदीहरुसँग गफिरहेका छन्। आजको विशेष चाड मनाउन पाएका छन्।
विवेकलाई उनका ठूलो मम्मीको छोरीहरुले टिका लगाइदिएका हुन्। उनको आफ्नो सानी बहिनी पनि छन् तर उनी भने आउन पाइनन्।
अस्पतालमा भाइटीका लगाउन दिदीहरु आउँछन् भन्ने लागेको थियो? भन्ने प्रश्नमा विवेकले हाँस्दै भने ‘२ दिन अघि नै प्लान भइसकेको थियोे।’
बेड नं ५०७, ट्रमा सेन्टर, चौथो तल्ला
ट्रमा सेन्टरकै बेड नं ५०७ मा भेटिए बाबुराम तामाङ। निधारमा सप्तरङ्गी टीका अनि गलामा थियो पहेँलो सयपत्री माला। मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट खुट्टा भाँचिएपछि उनी २ महिनादेखि अस्पतालमै छन्। दसैंको टीका लगाउन नपाएपनि दिदीको हातबाट भाइटीका लगाउन पाएको खुसी र उत्साह उनको मुहारमा प्रष्ट झल्किन्छ। उनी बेडमा बसेर सेल रोटी, मासु अनि विभिन्न प्रकारका पकवान खाइरहेका छन्।
उनले भने 'सेल निकै मिठो लाग्यो, यो मेरो मनपर्ने रोटी हो।'
बेडको छेउछाउमा ससाना हटकेशमा विभिन्न प्रकारका खानेकुरा देख्न सकिन्छ। साथमा छन् श्रीमती, छोरा, भतिज पनि।
'मलाई मनपर्ने मिठो मिठो खानेकुरा ल्याइदिनुभएको छ, परिवार नै आएको छ, रमाइलो लागेको छ,' बाबुराम भन्छन्।
ट्रमा सेन्टरकै पाँचौँ तल्लामा छन्, रामकुमार खनाल। बेड नं ४०९ मा पल्टिरहेका उनलाई उठ्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ।
म त्यहाँ पुग्दा उनकी दिदी चन्द्रकलाले उनलाई माथि उठाउन सिरानी मिलाइँदिदै थिइन्। साथमा थिए उनका बुढा मामा पनि। दुवैको गलामा माला थियो। निधारमा टिका। दुवै खुसी देखिन्थे।
दसैंको टिकाकै दिन गाडीले हान्दा उनको परिवार नै दुर्घटनामा परेको थियो। छोरी र श्रीमती अहिले उपचार पछि घर फर्केका छन् भने उनको बसाइ भने अस्पतालमै छ। उनको दाँया खुट्टाको हड्डी भाँचिएर स्टील लगाइएको छ भने तिघ्रामा पनि नराम्री चोट लागेको छ। रामकुमार भन्छन् यस्तो बेलामा पनि यति माया गरेर दिदी आउनुभयो, टिका लगाइदिनुभयो एकदम खुसी छु।'
त्यही छेउको अर्को बेडमा पनि टिका लगाएका सिन्धुलीका ठानाराम विक सुतिरहेका छन्। दुवै खुट्टा भाँचेका उनी सिन्धुलीको विपी राजमार्गमा उनको बाइक ट्रयाक्टरसँग ठोक्किएको थियो। उनी यही कार्तिक ५ बजेदेखि ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्। उनलाई बहिनी गिता विकले टिका लगाइदिइन्।
गीता भन्छिन् 'के गर्नु योपालि यस्तै भयो, दाइहरुको माया लाग्छ। अस्पतालमै भएपनि लगाइँदिए। दुर्घटनामा परेका भने मेरा कान्छा दाइ हुन्। कुरुवा बसेका उनले ठूल्दाइलाई पनि टिका लगाइदिएका छन्।'
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा भाइटीकाको दिन २ घन्टा घुमेर बिरामी, आफन्त र स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालको शय्यामै तिहारमा खुसी साटासाट गरेको हेरेपछि म पनि मनमनै मुस्कुराउँदै बाहिर निस्केँ।